Manchester City Oo War Cusub Ka Heshay Xaaladda Leroy Sane Oo Dhaawacmay Axaddii - Cadalool.com
Manchester City Oo War Cusub Ka Heshay Xaaladda Leroy Sane Oo Dhaawacmay Axaddii
Manchester City ayaa Axaddii uu usoo yeedhay war aanay jeclaysanin oo ahaa inuu dhaawac soo gaadhay laacibka Leroy Sane xilli uu u ciyaarayay qaranka Germany u ciyaarayay kulan saaxiibtinimo oo ay la yeesheen Serbia.
Milan Pavkov ayaa khalad xun ku galay Sane, waxaanu ku mutaystay kaadh cas oo lagaga saaray ciyaarta, balse dib ugu ugu soo laabanayaa xulka qaranka kulanka kusoo aaddan kaddib markii uu kasoo kabtay dhaawacaas.
Xulka qaranka Germany ayaa maanta la ciyaari doona waddanka Netherlands oo ay isku group yihiin ciyaaraha isreeb-reebka Euro 2020, waxaanay u baahan yihiin guul si ay iskaga maydhaan ceebtii ka raacday Koobkii Adduunka 2018 ee xilliga hore ay ka hadheen.
Serge Gnabry oo xanuun ku seegay ciyaartii Serbia, Manuel Neuer, Toni Kroos iyo Leroy Sane ayaa dhamaantood diyaar u noqday ciyaartan oo kusoo bilaaban ciyaarta maanta.
Tababaraha xulka qaranka Germany, Low, ayaa waxa uu sheegay in Sane uu taam u yahay ciyaartan.
“Labaduba, Leryo Sane iyo Serge Gnabry taam iyo diyaar ayay u yihiin ciyaartan. Waxaanan xaqiijinayaa in Manuel Neuer iyo Toni Kroos ay labaduba kusoo bilaaban doonaan.” Sidaas ayuu yidhi Low.
Si kastaba ha ahaatee, warkan kasoo yeedhay tababare Joachim Low ayaa farxad gelinaya Manchester City oo ka walaacsanayd xaaladda dhaawaca Sane oo ay ka baqaysay inuu seego ciyaaraha horyaalka Premier League ee waqtigan xaasaasiga ah.